अयोध्या कहाँ छ ? - Nawalpur News
अयोध्या कहाँ छ ?
२०७७ श्रावण ४, आईतबार प्रकाशित (१ साल अघि) ५२२ पाठक संख्या
वास्तविक अयोध्या वीरगन्जको पश्चिम ठोरीमा अवस्थित छ । ‘भारतले भगवान रामको जन्म स्थानको रुपमा भारतीय साइटलाई दावी गरेको छ, त्यसलाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सोमबार नेपाली छोरी सीता एक भारतीय राजकुमार रामसँग विवाह भएको परम्परागत “विश्वास” लाई अस्वीकार गरे ।
ओलीले वाल्मीकिको रामायणको नेपाली भाषामा पहिलो प्रामाणिक अनुवाद भएकोमा भानुभक्तको जयनती मनाउने समारोहमा बोल्दै राजनीतिक रुपमा ओलीको टिप्पणी भारतको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत महिना गरेको टिप्पणीको खण्डनको रुपमा आएको हो । जब उनले भनेका थिए कि भारत र नेपाल बीच सीमापार विवाहको सम्बन्ध रहेको “रोटी–बेटी” सम्बन्ध छ ।
यद्यपि ओलीको टिप्पणीले अयोध्याको “वास्तविक“ स्थान, भगवान रामको जन्मस्थल र उनको राज्यको राजधानी पुरानो ग्रन्थमा उल्लेख भए पछि बहस शुरु भयो । ओलीको दावी आफ्नो प्रकारको पहिलो होईन । यो स्थानको एक काफी लामो सूचीको लागी एक थप हो । ओलीले नेपालको पर्सा जिल्लामा ठोरीको सानो ग्रामीण नगरपालिकालाई रामको जन्मथलोको रुपमा राखेको छ ।
मौखिक इतिहास, वाल्किमीले रामायणमा संकलित गरेझैं अयोध्यालाई आधुनिक उत्तर प्रदेशमा राख्छ । रामायण परम्पराले अयोध्यालाई साहित्यको प्रमाणको आधारमा करीव ४,००० बर्ष देखि रामको जन्म स्थानको रुपमा चिनाउँछ । पुरातात्विक प्रमाणको अभावले बहसलाई वर्षौंसम्म चल्दै आएको छ । भारतीय अयोध्या भगवान् रामको जन्मस्थल हो कि मंगोलिया, थाईल्याण्ड र इन्डोनेसिया जस्ता देशहरुमा लोक कथाले समर्थन गर्दछ ।
तर त्यो अयोध्या कहाँ छ ?
– १९९० को दशकमा भाजपा–आरएसएसद्वारा समर्थित राम जन्मभूमि आन्दोलनको क्रममा अयोध्याको वर्तमान पहिचान गम्भीर चुनौतीको बीचमा आएको थियो ।
– स्वर्गीय चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री थिए जब उनले अयोध्या जग्गा सम्बन्धी विवाद सुल्झाउने प्रक्रिया शुरु गरे जुन सुप्रीम कोर्टले अहिले सुल्झाइएको छ ( हिन्दू र मुस्लिम पक्षलाई आफ्नो प्रमाणको आदान–प्रदान गर्न आमन्त्रित गरेर ।)
– यस समयमा बाबरी मस्जिद कार्य समितिका प्रतिनिधित्व गर्ने आर एस शर्मा, डीएन झा, एमए अली र सूरज भान लगायत इतिहासकारहरुको एउटा समूहले यो अयोध्या भगवान् रामको जन्मस्थल होइन भनेर प्रतिस्पर्धा गरे । यो एक प्रमुख विवाद उत्पन्न भयो ।
– ऐतिहासिक निर्णयको अयोध्या दुई वर्ष पछि, अर्को इतिहासकार श्याम नारायण पाण्डे “अयोध्याको प्राचीन भूगोल” नामको पुस्तक लिएर आए । पाण्डेले तर्क गरे कि आधुनिक समयको अफगानिस्तानको एउटा सहर लाई भगवान रामको अयोध्या भनेर चिनाउन सकिन्छ । १९९७ मा, पाण्डेले बेंगलुरुमा भारतीय इतिहास कांग्रेसको ५८ औं अधिवेशनमा “ऐतिहासिक रामालाई भगवान रामभन्दा फरक“ भन्ने लेखमा आफ्नो सिद्धान्त प्रस्तुत गरे ।
– सन् १९९८ मा पुरातत्वविद् एमवीएन कृष्ण रावले हरियाणाको बनवलीलाई भगवान रामको जन्मस्थान घोषणा गरे । उनले आफ्नो सिद्धान्त सिन्धु घाटी सिलको अध्ययनमा आधारित थियो । उनले रामायणको अयोध्यालाई पुरानो सरस्वती नदीको किनारमा रहेको हरियाणा साइटसँग पहिचान गरे । वास्तवमा रावले रामलाई सुमेरको लार्साको रिमसिन (१ भनेर चिनाए र घोषणा गरे कि उनको साम्राज्य सिन्धु घाटीदेखि सुमेर (वर्तमान इराक) सम्म फैलियो, साथै अफगानिस्तान र इरानलगायत उनको सिद्धान्त अनुसार आजको इराकमा बाबेलका राजा हम्मुराबी रामायणका रावण थिए ।
सन् २००० मा “द वेदिक पीपलः तिनीहरूको इतिहास र भूगोल“ राजेश कोचरले लेखेका थिए जसको संस्कृति र इतिहासमा गहिरो चासो छ । पुस्तकले दाबी गरेको छ कि भगवान राम अयोध्यामा जन्मिएनन् र यस दिशामा खोज्नु व्यर्थ अभ्यास हो । कोचरले सयरु नदीलाई अफगानिस्तानमा हरिरुड वा हर्योयूसँग चिनाए । पुरानो पाठको व्याख्या गर्दै उनले तर्क गरे कि भगवान रामका पुर्खाहरू पश्चिमी अफगानिस्तान–पूर्वी ईरान क्षेत्रमा बसोबास गर्थे ।
अयोध्या पाकिस्तान, र थाइल्याण्डमा
२०१५ मा, अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल ला‘ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) का अब्दुल रहीम कुरैशीले एक कागज प्रकाशित गरे, “अयोध्या एपिसोडको तथ्यहरु“ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्न कि रामको जन्म पाकिस्तानको रहमान ढेरीमा भएको थियो ।
अर्को अयोध्या दावेदार छ । यो थाइल्याण्डमा अवस्थित छ । यो वास्तवमा भगवान रामको जन्मस्थान पछि नामाकरण गरिएको छ । मध्ययुगीन शहर अब आयुठाया ऐतिहासिक पार्कमा भग्नावशेषमा अवस्थित छ । यो थाईल्याण्डको पुरानो सियाम राज्यको राजधानी थियो जसको राजा यू थायलन यस ठाउँमा सरेका थिए र त्यहाँ आफ्नो राजधानीमा बिफरको प्रकोपबाट बच्न खोज्ने क्रममा त्यहाँ राजधानी बनाए । यो नदी चाओ एजचबथब मा स्थित छ । थाई भाषामा एजचब एक ठाउँ को शाही कनेक्शन दर्शाउँछ ।
रामायण र अन्य पदहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार अयोध्याका लागि यी वैकल्पिक साइटहरू कुनै पनि रामको अयोध्यासँग जोड्न कुनै छेउछाउको प्रमाण छैन । यद्यपि त्यहाँ अर्को तर्क छ कि ११ औं शताब्दीमा अयोध्याको वर्तमान नाम भयो । पहिले यसलाई साकेत भनिएको थियो ।